KOMBIYUUTARKA "CINDERELLA": BUUG GACMEEDKA IYO QEEXIDDA QALABKA - KUFSI
Way adag tahay beeralayda casriga ah ee ku lug leh shimbiraha shimbiraha si ay u sameeyaan mashiinka mucjiso sida naqshad.
Kobcinta waa mashiinka la awoodi karo oo la isku hallayn karo oo kuu oggolaanaya inaad kor u qaado tirada saamiyada dhalinyarada ah ee aad ka filaneyso, iyadoon loo eegin xilliga xiga.
Suuqa casriga ah waxaa jira tiro badan oo moodhiyaal ah, awoodda kala duwan, shaqeynta iyo qiimaha.
Qeexida tusaalaha, qalabka
Kombiyuutarada "Cinderella" waa qalab caalami ah, maadaama ay heleen calaamado sareeya beeralayda khibrada leh iyo beeralayda dabiiciga ah. Qalabkan waxaa lagu soo saarayaa Novosibirsk, "shirkadda OLSA-Service" ee soo saaraha iyo hal-abuuraha hal qof ayaa soo saaraya 12 nooc oo moodal ah oo loogu talagalay digaag iyo ukun kale. Qalabku wuxuu ka shaqeeyaa caanaha 220V, laga bilaabo batteriga 12V, haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah - waxaa suurtogal ah in lagu ilaaliyo heerkulka loo baahan yahay iyada oo la isticmaalayo biyo kulul. Biyaha kulul waxaa lagu shubaa weel si gaar ah loogu talagalay kiisaska noocaas ah 3-4 saacadood kasta, sidaa darteed iyada oo aan joogin tamarta korantada, qalabku wuxuu awoodaa inuu shaqeeyo illaa 10 saacadood.
Kacbada waxaa laga sameeyaa xumbo badan oo cufan, oo loo yaqaanno sifooyinka qallafsan. Qaboojiyaha waxaa lagu dhejiyaa daboolka oo dhan qeybta oo dhan, taas oo hubisa in qaybinta heerkulka labbiska ee hareeraha. Dhismaha qalabka waxaa lagu kululeynayaa santoon gaar ah.
Baro sida loo sameeyo kuleyliye qaboojiye jir ah.
Dareemaha heerkulka ayaa ku yaal daboolka, marka heerkulka gudaha ee qalabku hoos u dhaco, kulaylka ayaa loo rogay. Xakamaynta heerkulka dheeraadka ah, xirmada Cinderella waxaa ka mid ah heerkulbeegga korantada ee korontada ku shaqeeya.
Xidhmada waxaa ka mid ah:
heerkulbeegyada elektaroonigga ah;
tuubo kaas oo biyaha laga furo kuleyliyaha;
laba xabbadood oo wareeg ah;
lix xabo oo caag ah;
Sagaal koone oo hoos yimaada shabakadda;
afar koob oo biyo ah.
Waqtigan xaadirka, saddex nooc oo qalab ah ayaa la soo saaraa iyada oo la raacayo habka loo marayo ukunta:
qalabka leh liiska xabbada ukunta. Qaabka miisaaniyadda, oo sida caadiga ah bilaaba jilbiilaha hiwaayadda. Qalabka noocan oo kale ah, ukumaha ayaa loo rogay afartii saacadoodba mar;
qalabka leh foori ukunta farsamada. Qalabkaan, guntinta ukunta waxay ku dhacdaa keli ahaanteeda, iyada oo loo eegayo muddad waqti go'an, laakiin habka waa in loo xakameeyo lebbiska lebiska ee ukunta;
qalabka oo si toos ah u leexleeya ukumaha. Qalabka noocan ah ee qalabka noocan oo kale ah wuxuu u madaxbannaanaa madaxbanaan ka dib waqti dheer oo la cayimay; ma jirto baahi loo qabo in la xakameeyo.
Moodooyinka kuyaal qaboojiyeyaasha Cyrillus waxay ku kala duwan yihiin tirada ukunta ay ka kooban yihiin:
dhigista 28 ukun waa qaybta ugu yar, fudud ee ugu jaban ee naqshadda. Ukuntu waxa uu beerta u leexinayaa habka gacanta. Qalabka waxaa loogu talagalay beeralayda digaaga ee bilawga ah;
"Cinderella" oo ku saabsan 70 ukumood oo leh afbaani toos ah, oo ka shaqeynaya batrool 12V ah oo ka soo baxa shabakada 220V, ayaa si faahfaahsan loogu faahfaahiyay fiidiyowga. Tilmaamkan waxaa loo tixgeliyaa hab fudud oo lagu kalsoon yahay. Qalabka leexinta ayaa ka shaqeeya habka tooska ah. Waxaa loo adeegsadaa hirgelinta digaagga dhallinyarada, shimbiraha iyo berriga.
"Cinderella" oo leh 98 ukumood oo leh xayiraan toos ah, oo ku shaqeynaya batrool 12V ah oo ka soo baxa 220V, si faahfaahsan uga hadlay fiidiyowga. Qalab aad u habboon oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay in laga tago shimbiraha sida: digaagga, shimbiraha, berriga, turkiga, digaagduur. Qalabka oo leh gawaarida toosan ee ukunta. Qalabka heerkulka ugu hooseeya.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ka ogaato miisaska dhalashada ee ukumaha digaaga iyo ukunta.
Tilmaamaha Guud ee dhammaan noocyada moodooyinka:
miisaanka fudud - qiyaastii 4 kg;
boogaha ayaa u diyaara ukumaha digaaga iyo goose, galka qaaska ah waxaa loo iibsadaa si gooni ah (loogu talagalay waraabinta);
Qiyaasta qiyaasta ee qalabka waa 885 * 550 * 275 mm, way kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay nooca;
isticmaalka awooda dhaqaale - qiyaastii 30 watti;
korontada - 220V;
joogitaanka saddexda-kuleyliyaha korontada ku shaqeeya, mid waliba wuxuu ku shubay hal litir oo biyo ah.
Tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan "Cinderella" waxaa laga heli karaa buug-tilmaameedka, kaas oo kuxiran qalabka.
Marka aad gadaneyso, hubi inaad hubiso qalabka kuleylaha. Markaad guriga joogtid, waxaad u baahan tahay inaad isku dubarido qalabka, u diyaariso shaqada iyo tijaabinta akhristayaasha muujiya aaladaha qiyaasta, dareen gaar ah waa in la siiyaa tilmaamayaasha heerkulka. Ka hubi heerkulbeega aad ku kalsoon tahay.
Sida ku qoran tilmaamaha, "Cinderella" waa in lagu meeleeyaa meel lagu xaqiijiyo hawo nadiif ah, helitaan bilaash ah oo hawo furan iyo heerkul qol heerkeedu yahay inta u dhaxaysa + 20 ° S ilaa + 25 ° C.
Waa muhiim! Waa mamnuuc in la isticmaalo kuleylaha iyada oo aan la buuxin walxaha kuleylka leh biyaha!
Lama oggola in qalabka la dhigo qabyaalad, meesha qorraxda tooska ah, oo leh tilmaamayaasha heerkulka + 15 ° S iyo wixii ka sarreeya + 35 ° S.
Ka hor inta aan la isticmaalin qalabka, waxaa lagama maarmaan ah in aad la socoto shuruucda amniga oo aad fiiriso dhammaan hawlaha diyaarinta ee loo baahan yahay:
dusha sare ee meesha uu kuugu dhejin doono waa inuu ahaadaa guri;
jeermis-diluhu wuxuu u baahan yahay inuu xakameeyo dhammaan qaybaha la kala saari karo ee cutubka, qaybtiisa hoose. Shaqadan waa in lagu celiyaa ka hor inta aan la saarin ukumaha, ka dib muuqaalka kalluunka;
Kaadida caaga ah ayaa lagu rakibay qeybta hoose ee qalabka - lambarkooda tooska ah waxay ku xiran tahay heerka qoyaanka qolka: qashinka weelka badan;
weelasha waxaa ka buuxsamey biyo. Inta lagu jiro kuleelka, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero heerka biyaha, waa suurtogal in la oggolaado xaalad ay biyuhu ka buuxsamaan;
xadhigga caaga ah ayaa la dhisay;
sida ugu fiican ee qalabka si aad u iibsato batteriga 12V, haddii aan lagu darin xirmada, isku xir. Marka uu jiro koronto la'aan, qalabku si toos ah ayuu u wareegayaa awoodda waxqabadka, tanina waa maalin dheeraad ah oo shaqada ah.
Qalabka wuxuu dhigaa ukumo aan ka badneyn 10 maalmood, kuwaas oo lagu kaydiyey gudaha gudaha heerkul ah + 12 ° C qiyaasta qoyaanka ilaa 80%. Siinta ukunta waxaa lagu soo xulay nadiif ah, qolool guri, iyadoon lahayn qalad iyo koritaan. Iyada oo gargaar ah ee ovoskop, ukunta leh laba xabbadood, oo leh sirin cad, waa la diiday.
Waa muhiim! Markasta, xidhitaanka daboolka maskaxda, fiiro gaar ah uji booska dareeraha iyo dareeraha heerkulka.
Si sahlanaato, xakamaynta ukunta waa in la calaamadeeyaa laba calaamadood oo ka kala socda dhinacyo kala duwan, kala-soocidda shaqada ee af-duubka ayaa markiiba la arki doonaa.
Nidaamka dhalitaanka ayaa ka kooban:
Kombiyuutarka "Cinderella" ayaa laga jarayaa shabakadda.
Daboolka qalabka waa la soo saaraa, biyaha waxaa lagu shubay kululeeyaha, taas oo loo adeegsaday diyaarinta.
Ku sii daa ukumaha adigoo isticmaalaya calaamado isku mid ah.
Daboolka ayaa lagu celiyaa meesha, dareeraha heerkulka waa la hagaajiyaa (waa in si adag loo dhigaa).
Biyaha kulul (+ 90 ° C) waxaa lagu shubaa kululeeyaha, hal litir oo midkiiba, daboolka ayaa si adag loo xirxiray.
Marka la eego buug-tilmaameedka, heerkulka cimilada iyo heerkulbeega ayaa go'an.
Haddii ay jirto aalad PTZ, ku xir shabakada.
Ka dib 30 daqiiqo, ku xir isku xidhaha shabakadda.
Heerkulka gudaha qalabka waa inuusan ka badneyn calaamadda + 39 ° C Heerkulka wanaagsani waa + 38.3 ° C.
Cuntada qoyan waa in la sameeyaa 4 saacadood kasta, ugu yaraan 6 jeer maalintii. Laba maalmood ka hor taariikhda la filayo ee muuqaalka guurka, guurka ayaa joojiya.
Qarsoonaanta qashinka ukunta digaagduurka.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta qaboojiyeyaasha Cinderella
Faa'iidooyinka qalabka waxaa ka mid ah sifooyinka soo socda:
fududahay in la isticmaalo;
qaybinta heerkulka isgoyska ee gudaha;
ilaalinta heerka qoyaanka qumman ee ku habboon;
awoodda ay uga shaqeyn karto batrool 12 volt ah;
qalab dhaqaale leh isticmaalka tamarta korantada;
ma qaadan meel badan;
wuxuu leeyahay sicir sare oo ah hingability of dhalinyarada;
raadinta geedi socodka ukunta;
kormeerida jagada biilasha;
jeermiska joogtada ah.
Ka hor intaadan go'aansan qalabka kaydinta, waa inaad ka saartaa qalabka loo yaqaan "rotator". Tallaabada xigta waa in biyaha laga daayo kuleyliyaha, si aad tan u sameyso, waxaad u baahan tahay inaad daboolka ka faaruqiso, furo godadka buuxa iyo qalajiyaha kuleylka dhowr maalmood ee meeshan.
Ma taqaanaa? Haddii korontada loo xiro muddo dheer, oo ukumo lagu dhejiyo masraxa, waa lagama maarmaan in kiiska lagu daboolo dareerayaal leh dareer kulul. Nidaamka noocan oo kale ah wuxuu u oggolaanayaa in lagu hayo heerkulka loo baahan yahay ee kuleylaha.
Kacbada waxaa lagu kaydin karaa qol kasta heerkul ah + 5 ° C ilaa + 40 ° C qoyaan aan ka badneyn 80%.
Cilladaha suurtagalka ah iyo ka saarista
Yaraynta heerkulka qalabka marka aad furayso daboolka. Dareemaha heerkulka ayaa laga yaabaa in ay isbedbeddelaan, isla habeeyaan dareeraha heerkulka si ay uhesho meel taagan. Raac qaliinka maskaxda.
Tilmaamaha heerkulku aanu demin ama uusan u jeedin meel kasta oo ka mid ah xakamaynta xakamaynta. Sababta ugu badan ee ku fashilantaa waa fashilmidda cimilada, waxay u baahan tahay in la beddelo.
Hawlgabka kululaynta ama kuleyliyaha joogtada ah uma soo jeedin. Sababta ugu badan ee ku fashilantaa waa fashilmidda cimilada, waxay u baahan tahay in la beddelo.
Ma taqaanaa? Haddii ay dhacdo cillad ka timaadda kuleylka laga yaabo inta lagu jiro kuleylinta, laakiin inta lagu jiro hawlgalka caadiga ah ee batteriga, ku xir xiraha iyo fiilada batteriga (adoo dejinaya xawaaraynta ilaa 2A). Goobtan, qalabku wuxuu u shaqeyn karaa waqti dheer, kaas oo ku siin doona fursad aad ku xallisid dhibaatada.
Qalabka miisaaniyadda "Cinderella" wuxuu ku habboon yahay beeralayda hibada leh, sameynta tallaabooyinkoodii ugu horeeyay ee lagu beeri lahaa xayawaanka yaryar, iyo beeralayda digaaga ee khibrad leh. Joogitaanka moodooyinka leh isbeddelada kala duwan waxaa ka mid ah xulashada qalabka saxda ah. Ilaalinta cakiran ee kicinta ayaa gacan ka geysan doonta in la ilaaliyo wax soo saarida iyo helida chicks caafimaad leh.